Led Lights ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Ming Feng
စက်ရုံစျေးနှုန်း - က ISO အရည်အသွေး
၁။ Mingfeng Lighting သည်အရည်အသွေးပြည့်မီသောစစ်ဆေးခြင်းစနစ်အရပြည့်စုံသော LED မီးလုံးများတပ်ဆင်ထားသည်၊ MF စနစ်သည်ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအပြီးတွင် AQL အရတင်းကြပ်သောစစ်ဆေးခြင်းစနစ်မတိုင်မီတွင်လုပ်ဆောင်သည်။ MF LED မီးလုံးအားလုံးသည် ၁၀၀% စမ်းသပ်ခြင်းကို ၄၈ နာရီမှ ၇၂ နာရီအထိရပ်တန့်ခြင်းမပြုဘဲစစ်ဆေးခြင်းကိုစတင်သည်။
ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁၅ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်သော LED မီးလုံးထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ဦး ဆောင်သောမီးလုံးကိုအထူးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံထုတ်ကုန်သည်အာမခံသက်တမ်း ၅ နှစ်ပေးသည်။ အချို့သောထုတ်ကုန် evan က ၁၀ နှစ်အာမခံသည်။ စီမံကိန်းမှခြွင်းချက်ဘာသာရပ်နှစ်ပေါင်း
& ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်။ နမူနာများအတွက်ခဲအချိန် 1 ပတ်နှင့်အမြောက်အများနိုင်ရန်အတွက်2ပတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြန့်ဖြူးသူ၊ ကုန်သည်များနှင့်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမပါ ၀ င်သောကြောင့် Ming Feng Lighting Co. , Ltd သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်၊ အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်များစွာအကျိုးရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကို MF စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်တင်ပို့သည်။
၄။ Ming Feng Lighting Co. , Ltd သည်အရည်အချင်းရှိသောအင်ဂျင်နီယာများ R ကိုပိုင်ဆိုင်သည်& D နှင့်နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာများသည်ဆက်သွယ်ရေးကိုချောချောမွေ့မွေ့လုံခြုံစေရန် MF သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်များအား LED အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏စီမံကိန်းများနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည်ထုတ်ကုန်လိုင်း၏အကြံပြုချက်များကိုပံ့ပိုးပေးပြီးစီမံကိန်းပုံကြမ်းရေးဆွဲချက်များအရ ROI (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်လည်ရယူခြင်း) ၏အလင်းရောင်တွက်ချက်မှုများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ROI သည်စွမ်းအင်ချွေတာမှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာမှုများကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပမာဏသည် ၁.၅ နှစ်မပြည့်သေးပါ (အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်စီမံကိန်းအခြေအနေများအရအလင်းရောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတစ်နှစ်အတွင်းပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်သည်) ။
မည်သည့်လူလတ်တန်းစားမဆို, သင် MF ထံမှစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုတိုက်ရိုက်ရရှိမည်။ ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဒေသတွင်းစျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်။
ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် ISO စနစ်အောက်တွင် ၁၀၀% ထုတ်လုပ်သည်။ စမတ်စက်မျိုးစုံသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ၂ ဝဝ% ကောင်းမွန်စွာစီမံထားသည်။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့်စနစ်သည်သူတို့၏အလုပ်ကိုသူတို့၏မျက်လုံးများကိုတန်ဖိုးထားမြတ်နိုးသည်။
နမူနာအစီအစဉ်အတွက် ၁ ပတ်။
အမြောက်အများနိုင်ရန်အတွက်2ပတ်။
စိတ်ကြိုက် item များအတွက်3ပတ်။
ပြင်ပ LED မီးများအတွက်5နှစ်
ပြင်ပ LED အလင်းအတွက် ၁၀ နှစ် (ပုံမှန်အားဖြင့်)
အဘယ်သူမျှမ bullshit ။
ကျနော်တို့အလင်းကို 10 နှစ်ကျော်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်
1.LED panel မီး 2.LED မီးအလင်း 3.LED မီးအလင်း 4.LED Triproof အလင်း 5.LED အမြင့် Bay Bay အလင်း 6.LED လမ်းကြောင်းအလင်း
7.LED မျက်နှာကျက်မီး 8.LED အမှတ်တရအလင်း 9.LED Linear အလင်း 10.LED အစက်အပြောက်အလင်း
1.LED ရေကြီးမှုအလင်း 2.LED မြင့်မားသောရထားလမ်းအလင်း 3.LED အားကစားကွင်းအလင်း 4.LED လမ်းမီး 5.LED ဥယျာဉ်အလင်း
6.LED ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားအလင်း။ ၇။ LED Wall Washer Light 8.LED Canopy Light 9.LED ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလင်း ၁၀။ LED မီးစက်များ
Eco ရေကြီးမှုအလင်းကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
Eco Lead Lead ရေလွှမ်းမိုးမှုကို LED Light သည်တံတား, သတ္တုတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, ဤမိသားစုသည်ထူးချွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအစိတ်အပိုင်းများ,5နှစ်အာမခံ၏အကူအညီဖြင့်စူပါအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တွင်အမြဲတမ်းရှိသည်။1. LED projection မီးခွက် clanchificification:①လည်ပတ်ခြင်းနှင့် symmetryမီးခွက်သည်လှည့်စားမှုဆိုင်ရာအချိုးကျရောင်ပြန်ဟပ်ကိုခံစေပြီးအလှည့်ကျအချိုးကျအလင်းရောင်ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်အတူအလင်းအရင်းအမြစ်၏အချိုးကျသောဝင်ရိုးကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောဝင်ရိုးတစ်လျှောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမီးခွက်များ၏ဘူးသီးကွေးသည်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်သည်။ဤစီမံကိန်းကိုမီးခွက်တစ်လုံးတည်းဖြင့်အလင်းရောင်မြှင့်တင်သောအခါ levenated မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဘဲဥပုံအစက်အပြောက်ကို ellipination အစက်အပြောက်တစ်ခုရရှိပြီး illumination မညီမညာဖြစ်နေသည်။ သို့သော် Limpli Lamp Lighting တွင်အလင်းအစက်အပြောက်များသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စုပ်ယူထားသည်။ ၎င်းသည်ကျေနပ်ဖွယ်အလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရာနှင့်ချီသောလှည့်လည်အချိုးကျသောစီမံကိန်းမီးအိမ်များသည်အားကစားကွင်းတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီးအားကစားကွင်းပတ်0န်းကျင်ရှိမြင့်မားသောမျှော်စင်များ၌မြင့်မားသော illumination နှင့်မြင့်မားသောစည်းလုံးညီညွတ်မှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများရရှိရန်အတွက်တပ်ဆင်ထားသည်။②အချိုးကျ Planar ပုံစံများဤကဲ့သို့သောစီမံကိန်းဆီမီးခွက်၏သက်ရှိ၏ကွေးကွေးသည်အချိုးကျလေယာဉ်နှစ်စင်းရှိသည်။ မီးခွက်အများစုသည်အချိုးကျဆလင်ဒါရောင်ပြန်ရောင်ခြည်ကိုမွေးမြူပြီးဆလင်ဒါ0င်ရိုးတစ်လျှောက်တွင် linear light source ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။③အချိုးကျလေယာဉ်အတန်းမီးခွက်၏ကန့်သတ်ထားကွေးသည်အချိုးကျလေယာဉ်တစ်စင်းသာရှိသည်။ မီးခွက်များကိုအချိုးမညီလက်ပံရောင်ရောင်ခြည်သို့မဟုတ်အချိုးကျဆလင်ဒါရောင်ပြန်ရောင်ခြည်များနှင့်အလင်းကိုကန့်သတ်ရန်ဇယားကွက်များဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤကဲ့သို့သောအလင်းပြင်းထန်မှုဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်မီးလုံးတစ်ခုတည်းနှင့်အတူကျေနပ်လောက်သောအလင်းရောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။④အချိုးမညီပုံစံထိုကဲ့သို့သောမီးခွက်များ၏မဆိုကွေးကန့်သတ်ထားသည်အဘယ်သူမျှမအချိုးကျလေယာဉ်ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အရောင်အသွေးစုံလင်သောမီးအိမ်အမျိုးမျိုးဖြင့်အရောင်အသွေးစုံလင်သောမီးအိမ်အမျိုးမျိုးနှင့်အပြည့်အဝအလင်းရောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်တိကျသောအလင်းရောင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအထူးမီးခွက်များနှင့်အဓိကအားဖြင့်ရောနှောထားသောအလင်းရောင်မီးခွက်များကိုမွေးစားသည်။2. LED projection lamp ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ:LED projection မီးခွက်အများစုသည်စွမ်းအားမြင့်မားသော LED ကိုအသုံးပြုသည် (LED ဒြပ်စင်တစ်ခုစီသည် PMMA ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမှန်ဘီလူးဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့် Endary မှထုတ်လွှတ်သောအလင်းကိုဖြန့်ဝေရန်အသုံးပြုသည်။ ကောင်းမွန်သောအပူလွန်ကဲခြင်းနည်းပညာကြောင့်ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်သည် 3W သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသောအာဏာကိုပင်ရွေးချယ်သည်။ LED projection မီးခွက်သည်များသောအားဖြင့်ရံဖန်ရံခါ, အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားအလင်းရောင်များအတွက်သင့်တော်သည်။
ဘယ်လို MF ဓာတ်ခွဲခန်းအကျင့်ကိုကျင့်?
LED အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်နီးကပ်စွာစားသုံးသူများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်သောနေကြသည်။ကျွန်တော်တို့သည်နိုင်ငံခြားဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ၏လေ့လာမှုနှင့်သုတေသနအားကောင်းလာစေရန်တင်းကြပ်စွာနဲ့ LED ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အလားအလာယိုစိမ့်အန္တရာယ်ဖယ်ရှားပစ်သင့်သည်,Third-party စမ်းသပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုခိုင်ခံ့စေထုတ်ကုန်များအားလုံးထုတ်လုပ်မှုလင့်များ၏အရည်အသွေးကိုခြေရာခံ,နှင့်ချောထုတ်ကုန်နမူနာစစ်ဆေးခြင်းမှထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှု, သော့ချက်လုပ်ငန်းစဉ်ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါးထောက်လှမ်းရာမှတပြင်လုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်။ဦးဆောင်လုပ်ငန်းများထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်တယ်ကြောင့်အရည်အသွေးကိုပြဿနာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းလက်လွတ်မသငျ့သညျ။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းထောက်ပံ့နေတဲ့မီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်ဤစမ်းသပ်မှုကိရိယာများသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များနားလည်သဘောပေါက်ထားရမည်,
MF ဘယ်လို soldering လုပ်နည်း
Ming Feng သည်ပေးပို့သူကိုမည်သို့ကူညီသည်ကိုအကောင်းဆုံး, Universer Certificate သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုလွတ်လပ်စွာဖွင့်ပြနိုင်ပြီးကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်လွတ်လပ်စွာ0န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်သောမီဒီယာအမျိုးမျိုးကိုဂဟေဆော်ခြင်းအားနားလည်သဘောပေါက်ရန်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ပထမ ဦး စွာ Gold Wire ၏ ဦး ခေါင်းအဆုံးကိုနယ်ပယ်တစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်ကုသရမည်။ ထို့နောက်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဖိအားပေးမှုအောက်တွင်ရွှေဝါယာကြိုးဘောလုံးသည်သတ္တုဂဟေဆော်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပလတ်စတစ်ပုံပျက်သောကြောင့်မီဒီယာနှစ်ခုသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆက်အသွယ်ရနိုင်ရန်နှင့် Ultrasonic ပွတ်တိုက်မှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် Atomic Assinity ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် Gold ဝါယာကြိုးများ ဦး ဆောင်လမ်းပြမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်။ MF ရွှေဝါယာကြိုးဘောလုံးဂဟေဆော်သော Silicon Aluminum Wire Wire Wire Wire Wire Welding သည် Silicon Aluminum Wire Wire Wire Wire တို့အတွက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည်။
အမှုန့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကဘာလဲ။1, လူအများစုအတွက်ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်, ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဆေးသုတ်မုန့်ဖုတ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ လက်တွေ့တွင်ဆေးသုတ်မုန့်ဖုတ်ကိုအပေါ်ယံပိုင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်မျိုးလုံးဟုပြောနိုင်သည်။ အသေးစိတ်ဆေးသုတ်ဆေးဖွဲ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - အလွှာတွင်ဆေးသုတ်ခြင်းတိုင်းကို အသုံးပြု. ခြောက်သွေ့သောကုသမှုအတွက်ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သောအပူချိန်မုန့်ဖုတ်ခန်းသို့ပို့သည်။မုန့်ဖုတ်ခန်းဆေးသုတ်ခြင်းဆေးသုတ်ခြင်းမုန့်ဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်ခြင်းအခန်းသည်စက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်စည်းဝေးပွဲဖွဲ့စည်းပုံကိုကျင့်သုံးသည်။ အခန်းခန္ဓာကိုယ်ကိုကလေးနှင့်အမေပလပ်စတစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ပလတ်စတစ်ပက်ဖြည့်တင်းစရာစက်နှင့်အပူ0င်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။0န်ထမ်းများ0န်ဆောင်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အခန်း၏ဘေးထွက်တွင်အလုပ်လုပ်သည့်တံခါးတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတွင်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းချည်ထားသောတံခါးကိုတပ်ဆင်ထားပြီးတံခါးကိုလေ့လာရေး0င်းဒိုးတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာဆေးသုတ်ထားသောမုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။3 နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နောက်ဆုံးတွင် Primer ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပက်ဖြန်းပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုပက်ဖြန်းပြီးနောက်, စက္ကူနှင့်ပွန်းပဲ့သောအထည်နှင့်အတူမုန့်ဖုတ်ဆေးသုတ်ဆေးသုတ်ဆေး police ။ ပန်းချီကားပြီးနောက်ဖုန်မှုန့်များနှင့်ပူဖောင်းများရှိမရှိကြည့်ရှုရန်မုန့်ဖုတ်မီးခွက်၏မျက်နှာပြင်ကိုထိပါ။ ဆေးသုတ်သည့်မီးခွက်များ၏မျက်နှာပြင်သည်အမှုန်များနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောခံစားမှုမရှိဘဲပြားချပ်ချပ်နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ရမည်။4, ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်, တောက်ပသော finish ကိုဆေးသုတ်ခြင်း၏ 1-3 ကြိမ်ဖျန်း, ထို့နောက်ဆေးသုတ်အလွှာကိုခိုင်မာစေရန်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုဖုတ်ပေးပါ။ ထို့နောက်ခက်ခဲသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုနှင့်အသာပုတ်ပါ။ ဆေးသုတ်ထားသောမုန့်ဖုတ်မျက်နှာပြင်သည်အက်ကြောင်းများ, လေးနက်သောဆေးသုတ်ရုပ်ရှင်,
Mingfeng Lighting Co. , Ltd. သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော LED Lighting ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်လိုင်းတွင် LED စိုက်ပျိုးခြင်းမီးများ၊ LED မီးများ၊ LED စက်မှုမျက်နှာကျက်မီးများ၊ LED panel မီးများနှင့်ရေစိုခံ LED မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်များပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကြီးမားသောခြံများ၊ စက်ရုံများ၊ ကျောင်းများ၊ တံတားများ၊ ဥမင်များ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ Mingfeng သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအလင်းရောင်လက်ကားများကိုအထူးပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကြိုဆိုပါသည်။
MF ရေကြီးမှုအလင်းသည်မြင်းအလင်းရောင်ကိုထွန်းလင်းပေးရန်ပြီးပြည့်စုံသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်မှ0န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မီးခွက်ကိုအလွန်နှစ်သက်သည်။ ညအချိန်တွင်အလင်းရောင်သည်သူတို့၏မြင်းကိုတစ်နေ့လုံးဘဝကိုပျော်မွေ့စေသည်။မြင်းသည်မြင်း၏မျက်လုံးများကိုခါလိုက်ပြီးမြင်း၏စိတ်သောကရောက်သောအခါမြင်း၏စိတ်ထားကိုပြောင်းလဲစေပြီးမြင်း၏နောက်ကွယ်ရှိလူများ၏စိတ်ထားကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ၎င်း, အလင်းရောင်ထောင့်။Ming Feng လေကြောင်းလိုင်းမိသားစုစီးရီး ဦး ဆောင်ခဲ့သည့်အားကစားကွင်းမီးခွက်များသည် 1:2အချိုးဖြင့်တူညီသောစွမ်းအားဖြင့်သတ္တုဟန့်အလ်မီးခွက်များကိုအစားထိုးနိုင်သည်။0န်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည်နာရီပေါင်း 60000 ကျော်အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးအာမခံသည် 10 နှစ်ဖြစ်သည်။ Metal Halide Lamp Limite ၏အရင်းအမြစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပျမ်းမျှ0န်ဆောင်မှုသက်တမ်း 3000 မှ 5000 သာရှိသောနေ့စဉ်0န်ဆောင်မှုသက်တမ်းရှိသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေရန်အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရိုးရာရွှေတံဆိပ်မီးခွက်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာစတင်သည်။ နေရာသည်မတော်တဆအားဖြင့်အာဏာဆုံးရှုံးမှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်လျှင်အလင်းရောင်ပြန်လည်ရရှိရန်မိနစ် 30 ကြာသည်။ LED မီးများသည်မတော်တဆပါ0င်မှုပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကစားခြင်းပြတ်တောက်မှုပြ problem နာကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ရှုထောင်တစ်ခုလှည့်ပတ်လည်ပတ်မှုဒီဇိုင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ညှိနှိုင်းမှု, အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ညှိနှိုင်းမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီးရှင်းလင်းသောအတိုင်းအတာဖြင့်အလင်းသည်နှလုံးကိုဖော်ပြသည်။မျိုးစုံတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများ၎င်းသည်ကြီးမားသောအားကစားနေရာများ, ဂေါက်သီးသင်တန်းများ, မြင်းပြိုင်ပွဲသင်တန်းများ, မြင်းပြိုင်ပွဲသင်တန်းများ, မြင်းပြိုင်ပွဲသင်တန်းများနှင့်အခြားနေရာများအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ အိမ်နှင့်ပြည်ပရှိဖြစ်ရပ်များ၏ HD အသံလွှင့်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ Racecourse Lighting သည်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ရပ်များကိုစုံလင်သောတင်ဆက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာသည်။ High-End RaceCourse Lighting ၏စျေးကွက်ရှေ့ဆောင်စလုပ်စဉ်တွင် Ming Feng မီးထွန်းခြင်းသည် R ကိုဆက်လက်မြှင့်တင်ရန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်& D နှင့် LED RACECOCICOSE Lighting ထုတ်ကုန်များ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ထိရောက်သောပြိုင်ဘက်အလင်းရောင်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးပြိုင်ပွဲအလင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းသည်
Japan ကားရပ်နားရန်နေရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးဆုပ်ခုံလိုင်းကို အသုံးပြု. 150LM / W ကိုထွန်းလင်းပေးသည်။ ၎င်းသည် 2x8w flurod cond lamp ကိုအစားထိုးရန်အကောင်းဆုံးမီးခွက်ကိုအသုံးပြုသည်။ မြေအောက်ခန်းတွင်ယာဉ်ရပ်နားရန်ယာဉ်ရပ်နားသည့်အခါယာဉ်မောင်းကိုပိုမိုလုံခြုံစေသည်။ဤအတောအတွင်း MF သည် Microwave Sensor-Sensor Sensor Sensor Sensor နှင့်ပါ0င်သောစမတ်ပြွန်ကိုပါ0င်သည်။လက်ရှိမြေအောက်ကားရပ်နားရန်နေရာ၏လက်ရှိအခြေအနေ - မြေအောက်ကားရပ်နားရန်နေရာများသည်ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်အလင်းရောင်ပြ problem နာသည် developer များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုအဓိကအားဖြင့်အောက်ပါရှုထောင့်များတွင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။1. မြေအောက်ကားဂိုဒေါင်ကအရမ်းမှောင်မိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ အချိန်မီအလင်းမရှိလျှင်မတော်တဆမှုများသည်ဖြစ်ပျက်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်လူများ၏စီးဆင်းမှုသည်အလွန်သေးငယ်သည်။ ၎င်းသည်ရာဇ0တ်သားများအနေဖြင့်အဆင်သင့်အခြေအနေများကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းနေသည်။2. အလင်းသည်စျေးကြီးသည်။ အထွေထွေကားဂိုဒေါင်အလင်းသည် 24 နာရီအလုပ်လိုအပ်သည်။ နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည်အတော်အတန်ရှိသည်။3. ကားဂိုဒေါင်အလံအရေအတွက်ကြီးမားပြီးအစားထိုးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပမာဏသည်ကြီးမားသည်။ ၎င်းသည်အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အခက်အခဲရှိသည်။အသွင်ပြောင်းမီလက်ရှိအခြေအနေဦး ဆောင်သည့်အသိဉာဏ်ရှိသောအလင်းရောင်ပြွန်သည်မြေအောက်ကားဂိုဒေါင်အလင်းရောင်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာမှုအဆက်မပြတ်အလင်းရောင်နှင့်အကြားဆန့်ကျင်မှုကိုအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းနိုင်ပြီးစွမ်းအင်ချွေတာခြင်းစွမ်းရည်သည် 85% အထိရှိသည်။ ကားဂိုဒေါင်အလင်းရောင်အသွင်ပြောင်းတွင်အသုံးပြုသောအသိဉာဏ်ရှိသောဂိုဒေါင်ကိုလည်း ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။Microwave Radar Induction LED LAVELDARD Induction သည် High-Frequency Microwave signal ကိုထုတ်လွှင့်ရန် doppler မူကိုအသုံးပြုသည်။ ပရိုဂရမ်အသိဉာဏ်အထောက်အထားများနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက် signal နှင့် power supping form ရေဒုံမိုက်ခရိုဝေ့ကားအုတ်မြစ်မီးပူရွတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးနှင့်အလိုအလျောက် induction ။ ကားဂိုဒေါင်မီးခွက်သည်ပတ်0န်းကျင်လျှပ်စစ်သံလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေကိုအလိုအလျောက်ညှိနိုင်သည်။ရေဒါ induction LED မီးခွက်Microwave ရေဒါရေဒုံလွိုင်နေ့၏လုပ်ငန်းဝိသေသလက္ခဏာများတစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်စီးဆင်းသောအခါရေဒါသည် 100% အပြည့်အ0သည် 100% အပြည့်အ0သည်အပြည့်အဝရှိပြီး, အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည် 18W ဖြစ်သည်။ 25 ±5စက္ကန့်ကြာနှောင့်နှေးပြီးနောက်ရေဒီယို induction lamp သည်အနည်းငယ်တောက်ပသောအခြေအနေကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။ 5w ။ အနည်းငယ်တောက်ပသည့်အခါအရောင်တောက်ပမှုသည်လုံခြုံရေး, စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်အလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ အကယ်. ဤဒေသတွင်တစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်ကားကိုရွေ့လျားနေပါကဤ in ရိယာရှိ in ရိယာရှိ induction lamp သည် 100% ဖြစ်သည်။ Radar Senraping Garage Lighting area ရိယာသည်အလင်းအောက်တွင် 360 ဒီဂရီကျယ်0န်းသောကြောင့် 6-8 သန်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစက်ဝိုင်း၏အလယ်ဗဟိုဖြစ်သောကြောင့်လူနှင့်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူ 6-8 မီတာရှိသောအချင်းဝက်နှင့်အတူ areas ရိယာများဖြစ်သည်။ရေဒါ induction ၏ slomar diraramMicrowave Radal Induction ၏အားသာချက်များ1. လူများနှင့်မော်တော်ယာဉ်များကဲ့သို့သောရွေ့လျားအရာဝတ္ထုများကိုအလိုအလျောက်အဓိပ္ပာယ်ကိုအလိုအလျောက်အဓိပ္ပာယ်ကိုအလိုအလျောက်အဓိပ္ပာယ်နားလည်ရန်နှင့်လိုအပ်သည့်အတိုင်းသင့်လျော်သောအချိန်မီအလင်းကိုပေးပါ။ လူများနှင့်ကားများလာပြီးတောက်ပသောလူများနှင့်ကားများအားလုံးကိုသွားကြသည်, အလိုအလျောက်အိပ်စက်ခြင်း, အလိုအလျောက်အိပ်စက်ခြင်း, မမှန်ကန်တဲ့အလင်းရောင်ကိုဖယ်ရှားခြင်း,2. ရေဒါ induction lay ရှိ LED Leal Lead Source Lead Source ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် LED LAMP ပုတီး၏အားသာချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။ ၎င်းသည်သာမန်မီးခွက်များ၏အားနည်းချက်များကိုရှောင်ရှားသည် - စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကြောင့်အလင်းချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်စွမ်းအင်ချွေတာမှု၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုသည်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အစားထိုးကုန်ကျစရိတ်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည်။ Induction သည်အလွန်အဆင်ပြေစေသည်။
မင် Feng တို့ Lighting စက်ရုံ successfull client ကိုအဟောင်းကိုမီးခွက်ကိုကိုင်နှိုင်းယှဉ်ပြောင်းလဲသွားပြီဘယ်အရာကိုမြင်ခြင်းဖြင့် supersied နေကြတယ်, ဒါကြောင့်သိသိသာသာလျှပ်စစ်မီးဥပဒေကြမ်းကယ်တင်တော်မူ၏, ထိုဘောလုံးအားကစားကွင်းအလင်းများအတွက်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာစီမံကိန်းပြီးဆုံး။ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်အားကစားစင်တာ (ပြည်တွင်းဂိမ်း) ၏အားကစားကွင်းများ၏အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအားတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏အဆိုအရဇွန်လ 22 ရက်နေ့ညနေပိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေးပါတီနှစ်ခုအလင်းအိမ်ဘို့ပေါ်မှာရာရှစ်အလင်းထမ်းဘိုး၏ရုတ်သိမ်းမှုစနစ် debugged စမ်းသပ်။ ဇွန်လ 23 ရက်နေ့တွင်နေ့အချိန်၌ debugging အခြားရုတ်သိမ်းမှုစနစ်ပြီးနောက်အားလုံးရှစ်အလင်းအိမ်, 40 မီတာမြင့်မားသော raceway အပေါ်ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်အိုလံပစ်အားကစားစင်တာကို၏အဓိကအားကစားကွင်းအတွင်းမီးခွက်မီး၏ installation ကနေအမျိုးမျိုးဇွန်လ 23 ရက်နေ့တွင် 6:30 pm မှာပေါ်ခဲ့ကြ အားကစားစင်တာအားကစားကွင်း 19 တန်ချိန်အလေးချိန်ရှစ် "နဲ့ Big Mac က" ရုတ်သိမ်းဆီမီးခွက်ထမ်းဘိုး, (ဝင်ရိုးစွန်းကိုယ်ခန္ဓာ၏ 51 မီတာအပေါင်းလျှပ်စစ်လှံတံကို2မီတာ) မြင့်မားသောအသီးအသီး 53 မီတာတပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါရုတ်သိမ်းယခုနှစ်မေလတွင်အပြီးသတ်နှင့်မီးခွက်နှင့်ဆီမီးခွက်ဘောင်၏အသီးအသီးအစုံမှာတန်ချိန်4တန်အလေးချိန်တိုင်ဒီဇိုင်းကိုမီး 8 ရုတ်သိမ်း high-definition အားကစား၏ထိုသို့သောအသံအတိုးအကျယ်နိုင်ငံအတွင်းရှားပါးသည်။ ခံခဲ့ရပါတယ်
Canada စူပါစျေးကွက်စီမံကိန်းကို 2016 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဈေးဝယ်ထွက်သည့်အခါ0င်ရောက်ခြင်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်စီမံကိန်းသည်စူပါမျက်စိအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။အင်တာနက်စက်မှုလုပ်ငန်း၏လူကြိုက်များမှုနှင့်အတူစူပါမားကတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်, စူပါမားကတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်, အခွင့်အလမ်းနှင့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။ 2016 ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်တွင်0င်ငွေနှင့်အမြတ်အစွန်းနှစ်ဆတိုးတက်ရန်စူပါမားကတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာမရှိကြပါဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံနှင့်ကွဲပြားသောသုံးစွဲသူအုပ်စုများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အထူးအရေးကြီးသည်။ စူပါမားကက်များ၏အရည်အသွေးနှင့်အတွေ့အကြုံသည် ပို. အရေးကြီးသည်။အလင်းရောင်သည်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်အတွက်စူပါမားကတ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံကိုတိုးပွားစေသည်။ စူပါမားကတ်အလင်းသည်အလင်းနှင့်အရိပ်လိုအပ်သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအလင်းနှင့်အရိပ်ကိုက်ညီမှုကိုက်ညီမှုသည်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေပြီးနှစ်သိမ့်မှုပေးနိုင်သည်။ Ming Feng Lighting သည်စူပါမားကက်များနှင့်ကွဲပြားသောစူပါမားကက်များအတွက်အလင်းရောင်အဖြေများပေးသည်။စူပါမားကတ်အလင်းရောင်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ပါအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်အထည်မီးခွက် - ၎င်းသည်စင်ပေါ်ရှိကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်ပေးနိုင်သည်။ အလင်းအသုံးပြုမှုနှုန်းသည်မြင့်မားသော်လည်းအာကာသအလင်းရောင်နှင့်တူညီမှုသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းမဟုတ်ဘဲပုံညှိနှိုင်းမှုအတွက်မသင့်တော်ပါ။ဒေါင်လိုက်ဖြန့်ဖြူးခြင်း lamp: ၎င်းသည်စတိုးဆိုင်နေရာ၌ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်ကောင်းသည်, ပုံမှန်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့်အပြင်အလင်းရောင်သည်တစ်ခုတည်းသောအရာနှင့်ကုန်စည်အလင်းရောင်မလုံလောက်ပါဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းမှုမီးအိမ် - ၎င်းသည်စတိုးဆိုင်နေရာ၌ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်ကောင်းခြင်း, အလင်းရောင်မြင့်မားခြင်း, မြင့်မားသောကုန်ပစ္စည်းများအလင်းရောင်နှင့်အလင်းရောင်ဖြင့်အာရုံစိုက်သင့်သည်။ဖောက်သည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကောင်းသောအလင်းလေထုနှင့်အတူဒေသများကဆွဲဆောင်ခံရဖို့ပိုများပါတယ်။ မှောင်မိုက်သောပတ်0န်းကျင်တွင်သာတောက်ပသောနေရာများကိုတွေ့နိုင်သည်။ Boutique Life Supermarketary ၏အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုပုံစံတစ်ခုလုံးတွင်အလင်းရောင်တစ်ခုလုံးသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အလင်းနှင့်အရိပ်အကြားဆက်နွယ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်အလင်းရောင်ထိန်းချုပ်မှုသည်အထူးအရေးကြီးသည်။ မီးအိမ်၏တည်နေရာနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်တောက်ပမှုနှင့်အလင်းရောင်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အလင်းရောင်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့အတွက်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော display နည်းလမ်းများအတွက်အလင်းရောင်မီးခွက်ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာလိုက်ဖက်သင့်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ဆက်သွယ်ရန်ကိုဤတွင်ထားခဲ့ပါ၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအင်ဂျင်နီယာသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမကြာမီရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်